Brexit: The Uncivil War(2019) – Channel Myanmar
IMDB: 7.0/10 10234 votes
2019 ဒီဇငျဘာထဲမှာ ပူပူနှေးနှေးထှကျရှိထားတဲ့ Brexit: The Uncivil War ဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးကို တငျဆကျပေးခငျြပါတယျ
နိုငျငံရေးဇာတျကားတဈခုဖွဈပွီးတော့ Benedict Cumberbatch ကိုဒီဇာတျကားထဲမှာ နိုငျငံရေးပါတီတှကေို လူထုစညျးရုံးရေးဗြူဟာတှေ ခမြှတျပေးတဲ့ ထိပျပွောငျပွောငျ နိုငျငံရေးသမားအသှငျမွငျရမှာဖွဈပါတယျ
ဗွိတိနျနိုငျငံရေးဖွဈရပျမှနျကို အခွပွေုရိုကျကူးထားတဲ့ဒီရုပျရှငျဟာ လှနျခဲ့တဲ့ လမြားက Channel Myanmar မှာတငျခဲ့တဲ့ the Great Hack ဇာတျကားမှာပါဝငျတဲ့ အခကျြအလကျမြားနဲ့ဆကျစပျမှုတှရှေိပါတယျ
… ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ပှဲဆူစခေဲ့တဲ့ ဒျေါနယျထရမျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ငှားရမျးခဲ့တဲ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီ Cambridge Analytica နဲ့ ဆကျစပျပတျသကျမှုတှေ Brexit ဖွဈလာအောငျ အှနျလိုငျးပျေါကနေ လှုံ့ဆျောပေးမှုတှေ ကနေ ပါလီမနျလှတျတျောကိုယျစားလှယျတှေ အသတျခံရတဲ့အထိဖွဈလာတဲ့အကွောငျးတှကေို ဖျောပွရိုကျကူးထားပါတယျ …
ဒီဇာတျကားကို နိုငျငံရေးစိတျဝငျစားသူတှေ နညျးပညာစိတျဝငျစားသူတှေ နဲ့ လူမှုကှနျယကျ အသုံးပွုသူတှေ ကွညျ့သငျ့ပါတယျ…မိမိတို့နိုငျငံလညျး မကွာခငျ ရှေးကောကျပှဲနီးလာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ အခွားတိုးတကျပွီးနိုငျငံတှမှော ဘယျလိုမြိုး မဲဆှယျမှုတှေ ပွုလုပျနကွေသလဲ ဆိုတာ ဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ပွီး ဗဟုသုတရစနေိုငျမှာပါ
IMDb – 7/10 နဲ့ rottentomaotoes – 79% ရရှိထားတာပါ…ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့
ဘာသာပွနျသူကတော့ Zuel Khant Thwin ပဲဖွဈပါတယျ….
2019 ဒီဇင်ဘာထဲမှာ ပူပူနွေးနွေးထွက်ရှိထားတဲ့ Brexit: The Uncivil War ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
နိုင်ငံရေးဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Benedict Cumberbatch ကိုဒီဇာတ်ကားထဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို လူထုစည်းရုံးရေးဗျူဟာတွေ ချမှတ်ပေးတဲ့ ထိပ်ပြောင်ပြောင် နိုင်ငံရေးသမားအသွင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ လများက Channel Myanmar မှာတင်ခဲ့တဲ့ the Great Hack ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်များနဲ့ဆက်စပ်မှုတွေရှိပါတယ်
… ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ပွဲဆူစေခဲ့တဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ငှားရမ်းခဲ့တဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီ Cambridge Analytica နဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုတွေ Brexit ဖြစ်လာအောင် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လှုံ့ဆော်ပေးမှုတွေ ကနေ ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အသတ်ခံရတဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကို ဖော်ပြရိုက်ကူးထားပါတယ် …
ဒီဇာတ်ကားကို နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေ နည်းပညာစိတ်ဝင်စားသူတွေ နဲ့ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေ ကြည့်သင့်ပါတယ်…မိမိတို့နိုင်ငံလည်း မကြာခင် ရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုမျိုး မဲဆွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး ဗဟုသုတရစေနိုင်မှာပါ
IMDb – 7/10 နဲ့ rottentomaotoes – 79% ရရှိထားတာပါ…ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့
ဘာသာပြန်သူကတော့ Zuel Khant Thwin ပဲဖြစ်ပါတယ်….
File Size : (900 MB) and (342MB)
Genre : Biography, Drama,History
Option 1 drive.google.com 900MB Blu-Ray 720p
Option2drive.google.com 342MB 360P
Option3fastload.cc 900MB Blu-Ray 720p
Option4fastload.cc 342MB 360P
Option5Soliddrive.co 900MB Blu-Ray 720p
Option6Soliddrive.co 342MB 360P
Option7disk.yandex.com 900MB Blu-Ray 720p
Option 8 disk.yandex.com 342MB 360P
Option9mirrorace.com 900MB Blu-Ray 720p
Option 10 mirrorace.com 342MB 360P
Wish Man ( 2019 ) 2019
Tracks (2013) 2013
Coach Carter(2005) 2005
Rescue Dawn(2006) 2006
God’s Not Dead2(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး 2016